नेपाल आज | दलालको चंगुलमा फसेर दुबई पुगेका युवाहरुको बिचल्ली, यातना सहेर बस्न बाध्य
दलालको चंगुलमा फसेर दुबई पुगेका युवाहरुको बिचल्ली, यातना सहेर बस्न बाध्य
आइतबार, २३ असोज २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
[caption id="attachment_32079" align="aligncenter" width="950"] तस्विर: अबैध मेनपावर संचालक दिपक कार्की र दुबइ स्थित कामदारहरुलाई कोचाकोच गरेर राख्ने जीवन नेपाली[/caption]
‘भिजिट भिसामा किन जानुभयो त ?’– रमेशले (नाम परिवर्तन) भने ‘केही थाहा थिएन दिमागमा पैसा कमाउने सपना थियो । दिपकले कमाइ राम्रो हुन्छ । कमाइ राम्रो भएन भने त्यसको जिम्मा लिने बताएको थियो । त्यसैले केही नसोची गए ।’ फेरि उनले अनुहार निहाउरो पार्दै थपे– ‘दुबई पुगेपछि यहा भनेजस्तो केही भएन । नत काम भयो, भिसा पनि यहाँ भनेजस्तो वर्किङ बनाइदिएन । अनी त्यतीबेला थाहा भयो म त दलालको दलदलमा फसेको रहेछु । पैसा डुबेपनि बल्ल तल्ल ज्यान जोगाएर आइयो । ’ यती भनीसक्दा निहाउरो मुख लगाएर बसेको उनको अनुहार झन् कालो भयो । अनुहारमा दुबइ जानुको पश्चाताप स्पष्ट थियो । त्यो भन्दा बढी चर्को ब्याजमा खोजेको ३ लाख पैसा डुब्नुको पीडाले उनको अनुहारको चमक उडिसकेको थियो । काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको इस्टर्न ट्राभल्स एण्ड टुर्सले भिजिट भिसामा कामदार पठाएको तथ्य नेपाल आजले भर्खरै प्रकाशित गर्‍यो । नेपाल आजको स्टिङ अपरेशनको क्रममा इस्टर्न ट्राभल्सको मानव तस्करीको कालो धन्दाको पर्दाफास भएको हो । उक्त स्टिङ अपरेशनपछि दिपकको जालोबाट दुबइ पुगेर फर्केका कामदारहरुले दुबई पुग्नेबाटोको बारेमा नेपाल आजलाई बताएका छन । दुबइमा रहेका कमदारहरुको भनाइले पनि स्पष्ट पार्छ दुबईमा दलालबाट जाने कामदारहरुको अवस्था सहज छैन । उनीहरको एउटै भनाइ छ ‘राम्रो काम लगाइन्छिु भनेर दुबई ल्यायो । तर, अहिले बिजोक बनायो । नत राम्रो काम पाइयो नत भिसा भनेजस्तो गरि वर्किङ नै बनायो ।’ इस्टर्न ट्राभल्स बैधानिक रुपमा दर्ता छैन । यसको सञ्चालक दिपक कार्कीले अबैधानिक कम्पनीबाट अबैधानिक धन्दा गरिरहेको छन । वर्षेनी हजारौ नेपाली युवालाइ दुबइमा अलपत्र पारिरहेका छन । यसको प्रमाण दुबईमा काम नपाएर फर्केका रमेश हुन् । उनका अनुसार दुबईमा दलालको चङगुलमा फसेर अलपत्र परेका नेपाली हजारौ छन । यसको बारेमा उनले नेपालआजसंग कुराकानी गरेका छन । ‘दुबई कसरी पुग्नुभयो ? ’ –यो प्रश्नको जवाफ रमेशले सजिलै दिए ‘पैसा ठिक पार्नु दुबई जाने र त्यहाँ काम पाउने जिम्मा मेरो भो भन्ने दिपकको भनाइलाई बिस्वास गरियो ।’ अनी मैले भने – ‘दुबईमा भिजिट भिसामा जान नेपालीहरुलाइ प्रतिबन्ध छ । कुन बाटो भएर जानु भो ?’ ‘भिसापाएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको ११ नम्वर काउन्टरबाट जाने हो । त्यहाको कर्मचारीहरुले केही रोकतोक नगरी हामीलाइ छिराउँछन । किनकी त्यहा दिपक कार्कीले पहिल्लै नै सेटिङ मिलाएको हुन्छ ।’ उनले एयरपोर्टबाट दुबई छिर्ने सजिलो तरिका सुनाए । ‘दुबई पुगेपछि के हुन्छ ? कसले लिन आउछ ?’ –रमेशले विगत सम्झिदै उत्तर दिए ‘दुवई जादा हामीसंग एक हजार अमेरिकी डलर (करीव एकलाख एघार हजार नेपाली रुपैया)को ट्राभल चेक हुन्छ । हामी दुबईको सारजांहा एयरपोर्टमा पुग्छौ त्यँहा हामीलाइ लिन दिपक कार्कीको एजेन्ट जीवन दास पुग्छ ।’ उनी यत्तिकैमा रोकिएनन् उनले जीवन दासको बारेमा यस्तो बताए –‘जीवनले एयरपोर्ट बाटै एक हजार अमेरीकी डलर हामीसंग लिन्छ । पैसा लिइसकेपछि आजमान स्टेटमा रहेको रहेको उसको कोठामा लिएर जान्छ । ’ [caption id="attachment_32087" align="aligncenter" width="750"] तस्विर: दुबई आजमान इस्तित अबैध नेपाली कामदारहरुलाई कोचाकोच गरेर राख्ने गरिएको कोठाका केही द्रृश्यहरु[/caption]
‘अनी दिपक कार्कीले त दुबईको सालीपार्क होटलको भौचर दिएको हुन्छ हैन र ? ’ –प्रश्न झर्न नपाउदै उनले निराश हुदै उत्तर दिए ‘दिपक कार्कीले भनेजस्तो सालीमार पार्क होटलमा कोहीपनि पुग्दैन । सालीपार्क होटलले पैसा खाएर भौचर उपलब्ध गराएको हुँदोरैछ । असलमा त्यो होटल भौचर नेपाल र दुबईका दुबै इमिग्रेसनलाई पंगु बनाउन रचिएको खेलमात्र हुँदोरहेछ ।’ ‘अनी जीवन दाशले कस्तो काम लगाईदिन्छ त ?’ –यो प्रश्नको उत्तर थिएन रमेशसंग । उनी काम नपाएर ३ महिनामै पैसा डुबेर नेपाल फर्किएका थिए । उनले खुइया काट्दै उत्तर दिए –‘ दुबईमा जीवन आफुलाई भगवान जस्तै ठान्छ । अलीकती हामीलाई फसाएको कुरा गर्‍यो भने तिमीहरु सबलाई बाहिर निकाल्छु । जीवनभर दुबई आउन नसक्ने बनाउँछु । मेरो कुरा चुप लागेर सहेर बस भन्ने धम्की दिन्छ ।’ एकछिन चुप भएर रमेशले फेरि भने–‘साउदी अरवको मरुभुमिमा छाडिदिने धम्किसमेत जीवनले बारम्बार दिन्छ । त्यसैले हामी सबै सहेर एउटै कोठामा चुप भएर बस्छौ ।’ ‘अनी जीवनले काम पनि लगाइदिन्छ की कोठामा थुनेर मात्र राख्छ ?’– रमेशले फ्याट्टै भने ‘यहाबाट तेत्रो पैसा तिरेर हामी काम गर्न नै जान्छौ । कामको लागि भनेर नेपालमै दिपक कार्कीले डेढ लाखसम्म कमिसन मात्रै राखेको हुन्छ । २७०० देखी ३२०० सय दिरामको काम पाउने ग्यारेन्टी गरेर पठाउँछ । तर, काम नपाइकन ३ महिना सकिन्छ । ’ उनले दुबईको कथा भन्दै गए । ‘३ महिनापछि सबैजना घर नै आउने हो र ?’–उनले मन अमिलो पार्दै आफुजस्तै सबै ३ महिनामै घर नफर्किने बताए । रमेशका अनुसार कोही घरबाट पैशा मगाएर बिशेष गरी ओमान बर्हिगमन भएर फेरी दुवैईको भिसा थप्छन । कोही केही हुने नदेखेर नेपाल फर्कन बाध्य हुन्छन् । ‘ त्यहाँ भिसा थपिएकाहरु जस्तोसुकै काम गर्न तयार भएपछि ७०० देखि १००० दिरामसम्मको काम गर्न राजी हुन्छन् । सामन्यतया १००० दिरामको काम खोजी दिए बापत जीवनले उनिहरुबाट कम्पनिलाई घुष खुवाउने भन्दै करीब २००० दिराम प्रति व्यक्ती लिने गर्दछन् ।’ उनले दुवईमा हुने बास्तविक कमाइको यथार्थ बताए । (नोटः दुबई मुद्राको हालको नेपाली बिनिमयदर करिब १०० को रु ३००० तोकीएको छ । को हुन् जीवन दास ?
झापा जिल्ला पृथ्वीनगर गाबिस घर भएका आफुलाई जिवन दास भनेर बताउने जिवन नेपाली करीब आठ वर्ष अघि कामदार भिसामा दुबई पुगेका थिए । उनले पहिले त्यहांका रहिस सेखहरुको लगानीमा रहेको होटेल जुमेरामा काम गरेको बताउँछन । जुमेरा होटेलमा संसारकै रहिस, सेलिब्रिटी तथा धनिहरु बस्ने गर्दछन् । सो उच्च होटेलको अनुभवसंगै मान्छेहरुसंग मिठो बोल्न सिकेका जीवन दास पछिल्लो वर्षसम्म त्यसै होटेलमा काम गर्ने दाबी गर्छन । पछिल्लो वर्ष नेपालमा जीवनको भेट इष्र्टन टाभल्सका दिपक कार्कीसंग भएको बताउँछन। दिपकले मेनपावर व्यवसाय छोडेर टुरिष्ट भिसामा नेपाली यूवालाई दुबईका रोयल प्यालेसहरुमा काम लगाइ दिन्छु भन्दै पठाउने काम गर्दछन् । यता दिपक कार्कीको योजनामा पहिलेको भन्दा बढी कमाउने देखेपछि जिवन दास होटेल जुमेराको जागीर छोडेको पुष्टि हुन जान्छ । जीवन आफु पनि टुरिष्ट भिसामा नै बसिरहेका छन । प्रतेक ३ महिनामा उनी ओमान गएर आएर भिसा रिन्यु गरिरहेका हुन्छन । दिपकले पठाएको मान्छे राखेर काम लगाइदिने भन्दै गैरकानुनी धन्दा गरिरहेका छन । गएको ३ महिनामा दिपक कार्की मार्फत जिवन दासले ३५ देखी ४० जना यूवाहरु दुबई भित्राएको तथ्य फेला परेको छ । दिपकले दार्जिलिङको युवाहरुलाइ समेत टुरिस्ट भिसामा पठाइ बिचल्ली पारेका छन् । कतीपय युवाहरु भिसाको डेट सकिएपछि नेपाल फर्किए । कोही बिचल्ली परेर त्यही बसिरहेका छन् । जिवन लिएको कोठाको मालिकले जीवनले कोठामा धेरै मान्छे राख्यो भन्दै गाली गर्ने गरेको त्यहाबाट फर्केका रमेश बताउँछन । रमेशका अनुसार धेरैजना राखेको भनेर कोठा मालिकले कहीले वाईफाईको पासवर्ड नदिने त गर्मीमा बिजुली नै काटीदिने गर्दछ । घर मालिकले छ जना भन्दा बढी मान्छे राखे बस्न नदिने बताउँदै आएकाे छ । र बेला बेला सबै कामदारलाई घर बाट निकाल्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । नेपाल आजको स्टिगं अपरेशनको समाचार संप्रेषण पछि जिवनले आफुसंग हाल कोठामा रहेका यूवाहरुलाई आफुबारे कसैलाई केही नबक्न निर्देशन दिएको बताएको छन् । दुबईमा अलपत्र पर्ने डरले उनीहरुले केही उजुरी नगरि बसेका छन । रमेशका अनुसार जिवनले काम लगाउन नसकेपछि अर्को दलाललाइ भेट गराउछ । अर्को दलालले कागज समेत गरेर काम लगाइदिने भन्दै २००० दिराम अर्थात करिब साठी हजार नेपाली रुपैया लिने गर्दछ ।
जसमा जिवन पानी माथीको ओभानो बन्न साक्षी भएर सो कागजमा हस्ताक्षरसमेत गरी ति युवाहरुलाई संरक्षण गरेको नाटक रच्छन् । असलमा त्यो कागजमा कुनै कानुनी आधार नै हुदैन । प्रहरिले कागजको भरमा कुनै कारवाही नै गर्दैन । किनकी अदालतमा मुद्दा नहाले सम्म लेनदेनको उजुरी दुबई प्रहरिले लिदैन । त्यैपनि, पैसा उठीहाल्छकी भन्ने झिनो आशा लिएर पुलिसथाना पुगेका नेपाली युवालाई दुबई प्रहरिले लेवरकोर्ट जान भन्छ । त्यो सम्भव हुँदैन । किनकी, टुरिष्टले काम गरेर बस्नु गैरकानुनी मानिन्छ । त्यसैले दलालले दुबईमा जस्तै नेपालमा पनि उन्मुक्ती पाउँछन । किनकी, टुरिस्ट भिसामा जानु नै नेपाली युवाहरुको अभिसाप हो । यस अघिको समाचार पढिसकेपछि दिपक कार्कीको ट्राभल्सबाट गएका आठ जना युवाहरु सम्पर्कमा आएका छन् । उक्त गिरोहको पर्दाफास गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ । (आर्को शृंखलामा हामी कामदारहरु को आनुभव तथा सेटिङमा संग्लन भनिएको आध्यागमनका कर्मचारी, प्रहरी तथा बैदेसिक रोजगार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको राय सहित आउने छौ। तपाईहरुको आसपासमा पनि यस्तो मानव तस्करी भईरहेको जानकारी छ भने हामी लाई जानकारी गराउनुहोस।) र यो पनि ► रोजगारीका लागि दुबई जाँदै हुनुहुन्छ ? कम्तिमा यी दलालबाट चाहिँ जोगिनुहोला ! (नेपाल आजको स्टिङ अपरेसन)
dalal in nepal depak karki dubai quatar jeevan das